Ezweni lethu, kubalulekile kakhulu imvelo nabantu ngokuvumelana nomunye. Lokhu esele ingatholakala usebenzisa Feng Shui. Nge nama mascots ibekwe kahle nezimpawu Bagua izindawo, okuyinto kungcwele octagon njalo trigrams emhlabeni futhi ngaphakathi isikhungo, yakha isisekelo yonke Feng Shui, ukuhlinzeka isiqondiso esicacile futhi okuyiyona ngcono amakhaya ethu. idatha ezisetshenzisiwe zone amandla omuhle elisizungezile ingabe usekhona.
Ukugcina amandla Qi wasebenzisa okuthiwa igridi Bagua, lapho ISIZINDA zivumelana amaphuzu cardinal futhi ube nezimpawu zabo. South oluhambisana enkazimulweni, eningizimu-mpumalanga - ngomnotho, eningizimu-ntshonalanga unesibopho uthando nomshado. East imele umndeni ukuphila nendawo - Impilo, entshonalanga - Izingane kanye Ukudala. North lifanekisela umsebenzi, enyakatho-mpumalanga - ukuhlakanipha, enyakatho-ntshonalanga - travel kanye nosizo.
Specific indawo trigrams ezakha igridi Bagua, yabe seyaziwa kubantu obakhathalelayo eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili. ekuhambisaneni uhlelo kanye nemithetho yayo ngokuhlanganyela isikhundla sayo asebenzayo nokulangazelela bazikhulumele, yokuletha ukuthula nokuchuma uzothola umphumela oyifunayo futhi wenze izinto zenzeke.
Phakathi Feng Shui abalandeli ukusakaza legend Owadala nokubekwa trigrams Bagua igridi wesifunda is ngenxa onkulunkulu, uyithumele nge isithombe ngemuva ufudu yazithandela waya ogwini. kamuva lesi silwane wathola esikweyoku Fu Xi, owakwazi nakancane trigrams okuyimfihlakalo.
Uma ukholwa Feng Shui-ke konke okwenzekayo empilweni zethu, zingahlukaniswa zibe ayisishiyagalolunye izikhundla kanye izici zokuphila. Uma zonke lezi ukuhlanganisa ndawonye ngendlela eqondile, it yakha Igridi Bagua. indawo ngayinye ilingana usayizi sangaphambilini futhi unesibopho endaweni ethile zokuphila - impilo, imali, uthando nokunye.
Ukuze sithole indawo ethize izingxenye of Bagua, udinga ukusebenzisa nekhampasi.
Ukuze uqale nge Sichaza, iphi enyakatho, ibhidlize zekhaya lethu eziyisishiyagalolunye imikhakha efulethini. Osenyakatho kanye igridi Bagua ecebeni ahambelana at iphuzu elithile, kubalulekile ukuba banake endaweni zisithakazelise ukwenza kusebenze kubo. Uma abanye endaweni akuyona indawo eyanele indiza, ungakwazi ukuchaza ke ekamelweni olandelayo.
Ukwazi inombolo yakho ye Bagua, okuyinto kunqunywa ngamunye ngokusebenzisa kulesi sibalo ubulili bakho kanye nosuku lokuzalwa, ungakha siqu Bagua yakho octagonal futhi unqume ukuthi iziphi iqembu ningabakaKristu.
Lapho unquma ukuthi yini ofuna ngempela ukuthola noma bafeza, udinga ukubala inani Bagua ngosizo izincwadi, okuyinto manje impela eningi. Khona ungaqala ukufunda izinhlamvu ezikhethekile kanye nama mascots, ngenkathi kancane kancane yathuthukisa ukuphila kwabo.
izinhlangothi Extra ayikho lapha - zonke izigaba ziwusizo ngokulinganayo futhi ebalulekile Bagua uhlelo (Feng Shui libona zonke izici zokuphila). Zonke emikhulu ebusweni bomhlaba kuyimiphumela ngokulingana ngqo nomunye, futhi uma kukhona inhlangano sesibuthakathaka (ezinjengothando), lokhu nomthelela omubi kuzothinta nezinye izinto ezisikhathazayo, ikakhulukazi ubuhlobo obuhle namalungu omkhaya kanye nezempilo. Uma wonke amaqembu Bagua endlini yakho eqinile nangokulinganisela, kungcono nje ephelele. Ngakho-ke, akufanele kube uhlobo oluthile ukuthuthukisa ndawo, kanti abanye abanalo, kungenjalo ngeke zibulale zonke izindawo. Ungakwazi ukuthola ingcebo kodwa ulahlekelwe okuthile okuhlukile. Konke kumele ahambisane. Kufanele libe isikhungo evelele kuphela, elifanekisela ubunye kanye nezempilo. Uma ungakwazi ukunquma ukuthi ungaqala kanjani ekuthuthukiseni indawo, qala nge isikhungo, futhi awukwazi ukuya okungalungile!
Abanye abantu bakholelwa ukuthi yonke izinhlelo banamathele nenqubo akudingekile. Lokhu akulungile! Khumbula ukuthi ukwakhiwa kwemitholampilo ezindaweni okubhekiswe like Bagua umthelela wajula Qi amandla egumbini luyanda zonke izindawo ezifanele zokuphila kwakho.